Baịbụl kwuru, sị: “Onye maara ihe bụ onye hụrụ ọdachi gaa zoo.” (Ilu 22:3) Ọ ga-ara ahụ́ gị abaa ná nsogbu ma ọ bụrụ na ị naghị ezigakarịrị onye na-abụghị nwoke ibe gị ma ọ bụ nwaanyị ibe gị ozi n’ekwentị.
Ihe mere eme: Ojiugo kwuru, sị: “O nwere otu nwa okorobịa mụ na ya dị ná mma. Ọ na-ezitekarịrị m ozi, mụ ana-ezigakwara ya. N’obi m, ọ bụ naanị enyi ka anyị bụ. Ma, amaghị m na o bu ihe ọzọ n’obi. Ọ bụ mgbe ọ gwara m na ya hụrụ m n’anya ka anya mepere m. Asị na m maara, mụ na ya agaraghị na-akpa, agakwaraghị m na-ezigara ya ozi mgbe niile.”
Baịbụl kwuru, sị: “Onye ezi omume na-atụgharị uche iji zaa okwu.” (Ilu 15:28) Ihe amaokwu Baịbụl a na-ekwu bụ na i kwesịrị ịgụgharị ihe i dere tupu gị ezigawara ya mmadụ.
Baịbụl kwuru, sị: “E nwere oge a kara aka maka ihe ọ bụla, . . . oge ịgbachi nkịtị na oge ikwu okwu.” (Ekliziastis 3:1, 7) Ihe a Baịbụl kwuru gbasakwara izigara mmadụ ozi.
;-) Ezigarala mmadụ ihe ị ma na ị gaghị agwa ya ma unu nọrọ ihu na ihu. O nwere otu nwa agbọghọ dị afọ iri abụọ na atọ. Aha ya bụ Ugomma. Ọ sịrị: “Ọ bụrụ na ị gaghị agwali mmadụ ihe ị chọrọ izigara ya, ezigarala ya ihe ahụ.”
;-) Kpebie mgbe ị ga na-eji ekwentị gị na mgbe ị na-agaghị eji ya. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Nneka kwuru, sị: “Anaghị m eji ekwentị m mgbe m na-eri nri ma ọ bụ mgbe m na-amụ ihe. M na-agbanyụkwa ya ma m gaa ọmụmụ ihe. Ihe mere m ji agbanyụ ya bụ ka m ghara ịpịgharịwa ya ma mmadụ zitere m ozi.”